Hadda: Qarax xooggan oo ka dhacay Gudaha Xabsiga Dhexe ee Muqdisho. Yaa lala beegsanayay Qaraxaas,? – Hornafrik Media Network
Hadda: Qarax xooggan oo ka dhacay Gudaha Xabsiga Dhexe ee Muqdisho. Yaa lala beegsanayay Qaraxaas,?
By HornAfrik	 On Aug 11, 2017
Qarax Xooggan ayaa goor dhawayd ka dhacay Banaanka Masjid ku dhex yaala Xabsiga Dhexe ee Xamar, halkaas oo ay Salaadda Jimcaha ku dukadaan Gudoomiyayaasha Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sidda, Garsoorayaasha iyo Xeer Illaaliyaasha Maxkamadda Ciidanka, Saraakiisha iyo Askarta Ciidanka Asluubta.
Qaraxa ayaa ka dhacay barta ay Masaajidka ka soo galaan Guddoomiyaha Maxkamadda Darajadda 1-aad ee Ciidamadda, iyo Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidanka. Waxaana Qaraxan fuliyay Qof isku soo xiray Walxaha Qarxa, kaasoo Qarxay Daqiiqado ka hor intii aysan soo galin Xarunta Xabsiga Dhexe Masuuliyiinta Maxkamadda Ciidanka.
Taliyaha Ciidanka Asluubta oo ku sugnaa Masaajidka ayaan waxba ku gaarin Qaraxa, Waxaase ku dhintay Askari ka mida Illaaladiisa, mid kalana Dhaawac ayaa soo gaaray, gabi ahaan gaarigiisina wuu ku burburay Goobta.
Maalmahaan ayaa gudaha xabsiga laga hadal qatarta ka imaan karta ciidan hada lagu xareeyay gudaha xabsiga dhexe oo loo tababaraya in ay ka mid naqdaan ciidanka asluubta. kuwaas oo laga shaki qabay in Qaarkood ay ka mid noqon karaan Alshabaab, maadaama aan la soo hubin ka hor intaan Tababarka loo furin.
Masaajidka xabsiga ayaa ku yaalo meel aanay tagi Karin qof aan la hubin. Waxaana ka hor inta uusan Qofku gaarin Masjidka uu sii maraa illaa iyo dhawr Bar Koontarool, taasoo ay adag tahay in si fudud uu ku galo Qofkii Ismiidaamiye ah. isagoo aan gacan ka helin cid ka tirsan Ciidanka, ama uusanba isagu ka mid ahayn.
Dagaal u dhaxeeya Alshabaab iyo Abuumansuur Rooboow oo mar kale ka qarxay Tuulo u dhow Xudur.